Maitiro ekugadzirisa yako terminal neNeofetch | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekupedzisira yeedu Gnu / Linux kugovera inogona kuenzaniswa seyese yekugovera. Kugadziriswa kwechishandiso ichi kunogona kuve nyore sekushandura iyo mavara ezvinyorwa kana zvimwe zvinokanganisa kugadzirisa senge kuiswa kweiyo logo yekuparadzira muASCII kodhi kana ruzivo rwemakomputa.
Iyo yekupedzisira yave yemafashoni sezvo ichiita iyo terminal kuti iwedzere mushandisi-inoshamwaridzika uye inogona kutobatsira kubatsira kuziva mamwe ma parameter eanoshanda system senge kernel yatinoshandisa, iyo desktop irikutakurwa kana ndangariro inoshandiswa.Kutanga Isu tinofanirwa kuisa iyo Neofetch chishandiso icho chinotibvumidza isu kuratidza aya ruzivo mune iyo terminal. Noefetch iri mumahofisi epamutemo eeshanduro dzichangoburwa dzekugoverwa kukuru, asi kana zvisiri, tinofanirwa kubvunza mukati zvinyorwa zviri pamutemo zvekuisa Neofetch. Mune yangu nyaya, iyo vhezheni iri Ubuntu 16.04 saka ndaifanira kuzviita nemaoko. Kana tangove nechirongwa chakaiswa, isu tinofanirwa kuratidza kuti chirongwa ichi chakatakurwa patinotanga terminal.
Ichi Izvo zvinoitwa nekuvhura iyo .bashrc faira yatinayo mumba medu. Pakupera kweiyo faira isu tinonyora iro izwi «Neofetch» ​​uye chengetedza iro gwaro. Izvi zvinoita kuti chishandiso ichi chimhanye pese patinovhura iyo terminal.
Asi inogona kuwedzeredzwa nemavara, mifananidzo, marogo, nezvimwe ... Tinogona kuita izvi nekuvhura iyo faira /.config/neofetch/config.conf . Mune ino faira tichawana ese marongero epurogiramu. Kugadziriswa kwayo kuri nyore. Pakutanga tichawana mitsara yakaita seinotevera:
Izvi zvinoratidza kuti chirongwa icharatidza ruzivo (info) yeiyo kernel ine zita «Kernel». Izwi rekuti "Kernel" kana iro remakotesheni rinogona kushandurwa rive chero chatinoda, asi nguva dzose mumakotesheni. Kana tichida kuti rumwe ruzivo rurege kuratidzwa, saka tinofanirwa kuisa hashi pakutanga kwetambo, tichitaridzika seichi:
Asi pane zvimwezve. Kana tichida tinogona chinja logo yekuparadzira uye mavara eiyi logo yakanyorwa muASCII. Nokuda kweizvi isu tinofanirwa kudzika mufaira rapfuura kuchikamu "# Ascii Sarudzo" Mariri tinotarisa chikamu
Uye mairi tinoshandura zita reiyo distro iri mumakotesheni ekuparadzira ane logo yatinoda kushandisa. Kana isu tichida kushandisa imwechete kubva mukugovera kwedu, saka tinofanirwa kuisiya seiyi:
Pazasi pemutsara uyu isu tichawana sei kuchinja logo mavara. Izvi zvinoitwa nekugadzirisa mutsara
Iwo manhamba anomiririra ruvara, isu tinofanirwa kuachinja zvinoenderana nemavara atinoda kana kushandisa zvakananga kusanganiswa kwemavara ekuparadzira, mune ino kesi isu tinofanirwa kuchinjira ku
Izvi zvichatibvumidza kunyatsogadzirisa iyo terminal yekuparadzira kwedu uye inogona kutotibatsira kuti tivhiringidze vashandisi kunze kwekombuta yedu. Iwe sarudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekugadzirisa yako terminal neNeofetch
PyCharm, ine simba IDE yekugadzira zvirongwa nePython